Cumar Filish oo u-gaarsi ku haya Beelo xilal laga siiyay gobolka Banaadir | Keydmedia
Cumar Filish oo u-gaarsi ku haya Beelo xilal laga siiyay gobolka Banaadir
Guddoomiyaha gobolka ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filish ayaa wado qorsho uu meesha kaga saarayo xilalka Beelaha Daarood iyo Dir laga siiyay degmooyinka gobolka Banaadir, isagoona aaminsan in xilalkaan Beeshiisa leedahay, balse laga qaatay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed 'Cumar Filish' ayaa is bedel ku sameeyay qaar ka mid ah guddoomiyeyaasha degmooyinka Muqdisho, iyadoona isbedelkaas uu ahaa mid ku saleysan ugaarsiga qabiilo gaar ah oo xilal ka hayay degmooyinka gobolka sida ay ogaatay Keydmedia Online.
Gudoomiye Filish ayaa meesha ka saaray halkii degmo ay Beesh Direed gaar ahaan Jufada Biyomaal ku laheyd gobolka Banaadir, waxaana xilkaas loo magacaabay nin ka soo jeedo Beesha Abgaal ah gaar ahaan Kabaalle, islamarkaana xigto yihiin duqa Muqdisho.
Xilkaan ayaa waxaa horey u hayay Cabdiraxmaan Sayid Cali oo ahaa guddoomiyihii degmada Shibis marna soo noqday guddoomiyihii degmada Dharkeenley, waxaana xilka laga qaaday bishii April ee sanadkaan kadib markii lagu eedeeyay in uu ku kacay falal musuq ah iyo Boonooyin u wax isdaba marin ku sameeyay.
Arintaan ayaa waxaa ka carooday Odayaasha dhaqanka Beesha direed, iyagoona sheegay in ay Guddoomiyaha la xisaabtami doonaan.
Macluumaad ay heshay Keydmedia Online ayaa sidoo kale sheegaya in haatan uu Cumar Filish wado qorsho uu meesha kaga saarayo xilka guddoomiyaha Beesha Daarood gaar ahaan Majeerteen ku leedahay gobolka Banaadir, waxaana xilkaas Beesha u metela Mahad Faarax Cabdulle oo ah guddoomiyaha degmada Cabdicasiis.
Gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabit Cabdi Maxamed ayaa gudoomiyaal degmo ka siiyay gobolka Banaadir qabiilada Daarood iyo Dir, waxaana talaabadaasi u cuntami weysay Cumar Filish oo aaminsan in beeshiisa leedahay degmooyinkaasi beelaha kale la siiyay.
Sidii ay shacabka Muqdisho ka filayeen ma aanu noqon Cumar Filish.
Farmaajo oo magacaabay Ra’iisul wasaare cusub
Warar 17 September 2020 23:54